काठमाडौं । आर्थिक नगरी वीरगञ्जमा तत्कालीन उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज निषाधले उदघाटन गरेको कम्पनी रजिस्टारको सम्पर्क कार्यालय नै गायब भएको छ । व्यवसायीहरुलाई अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ताका लागि वीरगञ्जम...
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा रु एक करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा पैठारीतर्फ रु ५३ लाख ६६ हजार, कृषि...
वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७५÷७६ को बजेटले वीरगञ्जलाई उत्साहित गर्ने बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहजीकरण तथा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिद्वारा शनिबार...
पोखरा । आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराले चालु आवको चैत मसान्तसम्म रु छ अर्ब २९ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । साउनदेखि चैत मसान्तसम्म राजश्व संकलनको लक्ष्य रु छ अर्ब पाँच करोड रहेकामा प्रगति बढेर १०४ प...
किसानको बजेटमा परामर्शदाताको रजाइँ, अर्बौँ दुरुपयोग
काठमाडौं । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा परामर्श सेवा नाममा अर्बौ रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको छ । यसबाट किसानका नाममा आएका योजनामा परामर्शद...
घोराही सिमेन्ट उद्योगद्वारा ५४ लाख सहयोग
दाङ । घोराही सिमेन्ट उद्योगले दाङका स्थानीय निकायलाई रु ५४ लाख १६ हजार सहयोग गरेको छ । उद्योगले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सडकको क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिका र वडालाई सो रकम सहयोग गरेको हो । ...
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आठ ग्यास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ । नेपालभर ५८ ग्यास उद्योग रहेपनि आठ उद्योगले मात्र गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । गुणस्तर चिह्न लिन...
वीरगञ्ज । पथलैयादेखि परवानीपुर हुँदै एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) सम्म २७ किलोमिटर छ लेनको व्यापारिक मार्ग निर्माणमा जितपुर बजार बाधक बनेको छ । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना वीरगञ्ज पथलैया कार्यालयका अ...
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा कानुनविपरित झण्डै ३० करोड रकम क्षतिपुर्ति दिईएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मेलम्ची खोन...
कोहलपुरबाट पनि जनता बैंकको कारोबार सुरु
काठमाडौँ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको शाखा विस्तारको निरन्तरतासँगै सोमबारदेखि कोहलपुर शाखाबाट कारोवार सुरु गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११, बाँकेमा रहेको शाखा बैंकको १०८औं शाखा हो भने बाँके जिल...
स्याङ्जा । देशका विभिन्न शहरमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले भने फोहरमैला बिक्रीबाट आम्दानी लिँदै आएको छ । उक्त नगरपालिकाले संकलन गर्न थालेकोे चार वर्षको अवधि...
अछाम । अछामको बूढीगंगा नदीमा औपचारिक रुपमा जलयात्र शुरु गरिएको छ । मष्टो आउटडोर कम्पनी काठमाडौँले साँफेदेखि धार्मिक पर्यटकीयस्थल चित्रेको जिमराडीसम्म बूढीगंगा नदीमा जलयात्रा शुरु गरेको हो । उक्त कम...
काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिको अध्यक्षमा देवीप्रसाद भुसाल निर्वाचित भएका छन् । युनियनको छैँटौँ जिल्ला अधिवेशनको भर्खरै सम्पन्न मतगणनाअनुसार भुसालले ८२४ मत ल्याई नि...
चियापानमा एक अर्ब विनियोजन, ५९६ प्रतिशत बढी खर्च महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा एक अर्ब १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत वृद्धि गरी ६ अर्ब ९४ कर...
काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आवमा मनसुन सामान्य हुने र चालु ठूला आयोजना तीव्र गतिमा अघि...
काठमाडौं । करोडौं बजेटका सरकारी आयोजनाले बजेट हतारमा सकाउन ‘असारे विकास’ को रिहर्सल सुरु गरेका छन्। देशभर विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका सिँचाइ, सडक, पुल, खानेपानी, मर्मत सम्भारलगायत निर्माण कार्य हतार–ह...
काठमाडौँ । विसं २०६८ को असारदेखि अहिलेसम्म ७ सय ५२ विद्युतीय दुर्घटना भएका छन् । विद्युतीय दुर्घटनाबाट शारीरिकरुपमा अंगभंग भएका व्यक्तिको उपचार खर्च र मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत नेपाल विद...